Ebee ka m nwere ike ịhụ koodu QR maka Microsoft Authenticator? - Microsoft
Isi > Microsoft > Microsoft authenticator barcode - usoro kachasị
Microsoft authenticator barcode - usoro kachasị
Ebee ka m ga - ahụ koodu QR maka Microsoft Authenticator?
Tinye akaụntụ naNyochaa Microsoft
MepeeNyochaa Microsoftngwa na ekwentị gị.
Pịa +> Ọrụ ma ọ bụ akaụntụ ụlọ akwụkwọ.
Jiri ekwentị gị kaAjụjụetiti na kọmputa gị. ...
Akaụntụ gị ga-akpaghị aka kwukwara na ngwa na a 6 ọbulakoodugosipụtara.
Ndewo, nke a bụ Gary si MacMost.com. Taa, aga m egosi gị otu esi ejikwa ọkwa na Mac gị.
A na-ewetara gị MacMost ekele nye otu nnukwu ndị nkwado 800 +. Gaa na MacMost.com/patreon.
Nwere ike ịgụkwu banyere mkpọsa Patreon ebe ahụ. Were akụkụ ma chekwaa naanị ọdịnaya na mwepu ego. Ya mere, mgbe ị na-a ngosi na gị Mac, ọ ga-egosi na n'elu nri akuku.
Dị ka nke a. Nke a ga - apụ naanị obere sekọnd. Lelee ya ka ọ na-abanye na ya.
Fọdụ nwere ike ịnọ, m ga-egosi gị otu esi ejikwa ya na nkeji. Ozugbo ha lara, enwere ike ịnweta ha site na ịpị Datebọchị na Oge na akuku aka nri. Nke a ga-eweta na ngosi center.
Ebe ngosi ahụ nwere akụkụ abụọ. Ma Ọkwa n’elu na wijetị na ala. Ugbu a enwere ozi ngosi atọ na-egosi ebe a, mana ị nwere ike ịhụ na enwere m ihe ngosi ebe a na-agwa m na enwere ọtụtụ.
Marakwa na ụfọdụ n'ime ndị a bụ ndị e jikọtara ọnụ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịhụ na enwere ọkwa kalenda, mana enwere otu ncheta ncheta na ozi ozi. Mgbe m kụrụ 'More' ị ga - ahụ na enwere ndị ọzọ ebe a, gụnyere otu sitere na weebụsaịtị na otu na Oge Ihuenyo.
Nwere ike ịga n'aka nri nke Center Center ebe a ma enwere obere bọtịnụ ga-enyere gị aka ibelata akụkụ 'More'. Nwere ike ugbu a wepụ ngwa ngwa ndị a. Mara: mgbe m tụgharịrị mmadụ, m ga-enweta obere bọtịnụ x ma nwee ike ịjụ ya.
Enwekwara m ụfọdụ nkwalite n'okpuru ebe a. Ihe a dabere na ngwa ahụ na-eziga ngosi ahụ. Yabụ, enwere m bọtịnụ mkpọtụ kalenda.
Ncheta nwere ihe dị iche iche. Ka m pịa otu ahụ ebe a iji hụ ọkwa abụọ nke ncheta. Can nwere ike ịhụ na enwere bọtịnụ 'Nhọrọ' ebe ahụ.
Enwere m ike ịpị ya ma họrọ otu nhọrọ nke echetara m ncheta. Ngwa ndị ọzọ nwere ike ịnwe nhọrọ dị iche iche. I nwekwara ike pịa 'Gosi obere' ebe a iji kpokọta ha ọzọ n'otu otu.
Mara kwa mgbe ụfọdụ enwere m obere bọtịnụ ebe a na nke ọzọ dabere na ngwa ahụ. Enwere m ike pịa ya na Kalinda ma hụ ozi ndị ọzọ gbasara ihe ahụ. Enwere isi ihe atọ ebe a ma m nwere ike pịa na nke ahụ ma tọọ ụfọdụ nhọrọ ebe a na-enweghị ịga na Mmasị Sistem.
OneDrive slowing kọmputa
Ya mere enwere m ike iwepu ọkwa kalenda ebe a ma ọ bụ woli elu na ntọala ahụ, nke anyị ga-eleba anya na obere oge. Enwere m ike pịa ebe a iji belata nke a ọzọ. Ọ bụrụ na m nwere otu dị otú a, enwere m ike pịa bọtịnụ x ebe a iji mechie otu, ma ọ bụ m nwere ike pịa ebe a ka mhichapụ onye ọ bụla nọ na otu.
Ka anyị lelee ozi ndị a Ebe a. M pịa ya ma ị hụ na enwere m nhọrọ iji tụfuo nke ọ bụla. Enwere m ikike ihichapu ihe niile.
Enwekwara m nhọrọ ebe a dika 'Gosi More' nke m nwere ike iji ziga nzaghachi ma ọ bụ kaa nke a dị ka a na-agụ ebe a na Center ngosi. Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-enweta ọtụtụ ọkwa ma ha na-anọkarị n'ụzọ ma na-ege ntị, mgbe ahụ ịchọrọ ịchịkwa ha. Iji mee nke a, gaa na ntọala ntọala wee banye na ọkwa ahụ.
Ga-ahụ ndepụta nke ngwa na usoro sistemụ na-eji ọkwa. Họrọ otu, ị ga-ahụ nhọrọ ngosi maka ngwa ahụ n'aka nri. Nwere ike igbochi amamọkwa kpamkpam.
Iji maa atụ, ka anyị gaa na Ozi m nwere ike gbanyụọ amamọkwa maka ozi kpamkpam. M nwekwara ike ịhọrọ ịdọ aka n'ụdị. Ana m ahụ nke a na akụkụ aka nri nke ihuenyo mgbe m na-arụ ọrụ m na mberede ọkwa mara.
ele ihe anya anaghị adịcha mma
Enwere m ike ịsị mba, achọghị m nke ahụ. Achọrọ m ka ọ dịrị na etiti ozi, mana achọghị m ka ọ na enye m nsogbu na uzọ ọzọ. Ma ọ bụ m nwere ike ịhọrọ ọkọlọtọ.
Ugbu a gosipụtara ọkọlọtọ ma pụọ ​​na akpaghị aka mgbe sekọnd ole na ole. Ma ọkwa ga-apụta ma nọrọ ebe ahụ ruo mgbe ị mere ihe. Nwekwara ike ịhọrọ igosi ha na Notlọ Ọrụ Ngosiputa ọlị.
Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnata ozi ngwangwa sitere na ngwà, dịka. Dịka ọmụmaatụ, site na ngwa egwu, ọ bụrụ na ọ na-egwu egwu ọhụụ mana ị chọghị ka ebe ngosi banye ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịkwụsị nke a maka egwu.
You nwekwara ike ịhọrọ ma ọ bụ na-egosi ya na mkpọchi ihuenyo. Ya mere tupu ị banye. Nke a dị mkpa mgbe ngwa na-enye gị ozi nzuzo.
Ọmụmaatụ, na ozi, ị chọrọ ka ha ghara ịpụta na mkpọchi ihuenyo. You nwere ike ịhụ akara ngosi Badge ebe a na Dock mgbe ọ gosipụtara obere ọnụọgụ, dị ka ozi dị n'elu na-ekwu na m nwere ozi abụọ. Ọ bụrụ na m gbanyụọ nke ahụ maka ozi, ị ga - ahụ ugbu a na enweghị m nọmba.
Enwekwara m ike ịhọrọ ma ọ bụ ịkpọ ụda na ọkwa. N'ihi ya, m ka nwere ike igosipụta ha, mana nwayọ. Enwekwara nhọrọ maka nyocha.
Dịka ọmụmaatụ, enwere m ike igosipụta na m nwere ọkwa maka ozi mana enweghị nhụchalụ nke ozi ahụ. Maka ijikọ ọnụ, enwere m ike ijikọ ya na akpaghị aka, kekọrịta ya na ngwa, ma ọ bụ enweghị mkpokọta ma ọlị. Ya mere mmewere ọ bụla dị n’ebe ọ bụla dị ka ọ dị na mbụ.
Enwekwara ntọala zuru ụwa ọnụ maka ngosi ngosi. Rịba ama na nke a na-egosi mgbe akpọchi (ndabere). Ọfọn, ọ bụrụ na m gbanwee nke a na 'Mgbe niile', 'Mgbe niile' bụzi ndabara.
Yabụ ị nwere ike ịgafe ngwa niile enyere ka ezigara gị ọkwa ma gbanwee ọdịdị ha. Yabụ ị nwere ike iwepụ ọtụtụ ihe na-akpasu iwe ma nwee naanị ndị dị gị oke mkpa. Ugbu a rịba ama na e nwere weebụsaịtị edepụtara ebe a.
Agara m na weebụsaịtị nke m maara nwere ọkwa. Ugbu a, Mac Rumors na-eme ihe niile. Kwesịrị ịme arịrịọ site na weebụsaịtị.
Gaghị enweta otu n'ime ọkwa ndị a na-arịọ gị ka ịnabata ọkwa kwa oge ị gara na weebụsaịtị. Mana enwere m ike ijikwa ọkwa weebụsaịtị a ebe a. I nwekwara ike ime nke a na Safari.
Nwere ike ịga Safari, Mmasị, na weebụsaịtị si n'ebe ahụ. Ebe ị ga-ahụ ndepụta nke weebụsaịtị na weebụsaịtị nke ị kwere ka ọkwa na. N'ebe a ị nwere ike ịjụ ma ọ bụ nye ohere ma ọ bụ naanị họrọ ma wepu ya ka ọ dị ka ị na-agatụbeghị weebụsaịtị a.
Ugbu a, ị nwere ike ịhụ na weebụsaịtị ahụ na-efu site na ntọala sistemụ. Ya mere, ụfọdụ ndị ọzọ aghụghọ ebe a na ngosi Center. Can nwere ike ijikwa-pịa ma ọ bụ mkpịsị aka abụọ pịa trackpad n'oge ọ bụla iji nweta ụfọdụ nhọrọ ebe a, nyefee nwayọ, ma ọ bụ kwụsị ọrụ maka otu ọ bụla.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịnweta ọkwa, ma ọ bụ ọkọlọtọ ma ọ bụ ọkwa, ị nwere ike pịa ma dọrọ ya gaa n'aka nri iji mee ihe ọ bụla. Naanị ụdị nweta ya. A ka ga-egosipụta ya n’ebe a n’ebe ngosi.
Ugbu a dịkwa ebe a na sistemụ ntọala, ificationsma Ọkwa, ihe izizi abụghị ngwa, mana ntọala 'Egbula'. N'ebe a, ị nwere ike na-akpaghị aka 'Ekwela Nsogbu' site na ịhọrọ 'Site' na ịtọọ oge iji gbanye na oge gbanyụọ. Nwere ike ime ka ọ gbanye mgbe ngosi na-ehi ụra ma ọ bụ mgbe ihuenyo na-ekpochi ma ọ bụ mgbe ị na-mirroring na TV dị ka a projector.
Yabụ, ị na-enye a ngosi ma ọ bụ na-ekiri a TV show na ị na-airing na airplay. I nwekwara ike gbanye Ekwela Nsogbu site na ịga na Ogige Njikwa ebe a wee pịa Pịa Emegbula. Nwere ike ịgbalite ya maka otu awa, ruo mgbede, ruo echi, ma ọ bụ naanị na-adịgide adịgide.
Ya mere, mgbe m tinyere ya mgbe m nwetara ozi ọhụrụ, ọ dịghị ihe na-eme. Agaghị m ekwe ka ọ pụta ebe a. Otú ọ dị, mgbe m pịrị na Centerlọ Ọrụ Ọkwa, enwere m ike ịhụ na ozi ahụ rutere m n'ezie ma na-egosi na Center ngosi.
Enwetaghị m ozi ahụ na ihuenyo a n'ihi na agbanyụrụ m nsogbu. I nwekwara ike na-adịgide adịgide tinye a 'Ekwekwala' ozi na menu mmanya site na imeghe akara center na-adọkpụpụta 'Unu nsogbu' na chọrọ ọnọdụ na menu mmanya. Ya mere ugbu a, unu nwere ọnwa nta a.
Nwere ike ịpị ya ka ịgbanwuo Ederede ma ọ bụ lelee ọnọdụ dị ugbu a dị ka a ga - asị na ọ ‘gbanyụrụ’ ma ugbu a ị ga - ahụ na ọ dị. Ya mere echere m na nke a bụ ọrụ a na-apụghị izere ezere maka onye ọrụ Mac ọ bụla iji banye na Mmasị sistemụ ma lelee ntọala gị. Jiri ngwa gị ma hazie ha.
Ma ọ bụghị ya, ị ga-enweta ọtụtụ ọkwa ma ha ga-anọ n'ụzọ, ma ọ bụ na ị gaghị enweta ọkwa zuru oke. Don't maghị mgbe ị nwetara ozi ọhụrụ ma ọ bụrụ na ị naghị achọ. Ificationsma Ọkwa bụ akụkụ bara ezigbo uru n'iji Mac gị, mana ịkwesịrị ịchịkwa ha iji nweta ọtụtụ n'ime ha.
Kedụ ka m ga-esi kpọghee ihe nyocha Microsoft m?
Ọ bụrụ na ịchọrọ akaụntụ gịimehe, ị ga- abanye iji nweta koodu nchekwa. Echiche: can nwere ike iji akara ekwentị ọ bụla rịọ maka koodu nchekwa. Ekwentị ekwenti ekwenyeghi na akaụntụ gi.
Kedu ka esi tinye akaụntụ na Authenticator?
Microsoft gịtinye Akaụntụna ngwa
Microsoft MepeeNyochaangwa na ekwentị mkpanaaka gị. ...
Na gam akporo, họrọtinye AkaụntụN'elu aka nri aka nri, pịa hazie ma jikwaa akara ngosi. ...
Họrọ na ibetinye Akaụntụnhọrọ onweakaụntụ.
Gini ka Microsoft Authenticator App Na-eme?
Nke angwaka ị banye na nke gịMicrosoftakaụntụ na-enweghị paswọọdụ. Security na-eji akara mkpisiaka aka, ihu mmadụ ma ọ bụ akara PIN. ... Onyengwa Microsoft Authenticatordị maka gam akporo na iOS. Nwere ike dengwajiri ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ mbadamba.
Ebee ka m ga-enweta koodu mmanya maka Microsoft Authenticator?
M ebudatara App maka ekwentị Windows 8.1 m ma ọ na-ekwu na m nwere ike i scanomi koodu mmanya ma ọ bụ tinye igodo nzuzo. Enweghị m. Kedu ihe m nwere ike ịme? ebee ka m ga-enweta koodu mmanya maka microsoft authenticator? M ebudatara App maka ekwentị Windows 8.1 m ma ọ na-ekwu na m nwere ike i scanomi koodu mmanya ma ọ bụ tinye igodo nzuzo.
Kedu otu oge Microsoft Authenticator na-agbanwe koodu m?
Otú ọ dị Mgbe m malitere Authenticator ọ jụọ m maka akaụntụ m nke m họrọ na kama ịhapụ m i scanomi na barcode ọ na-egosi na nkịtị Authenticator koodu nke na-agbanwe ọ bụla 30 sekọnd. Laghachi na Mkpa m na-anwa itinye koodu nke ekwentị m mere ma ọ bụ ihe ọjọọ.
skype blurry foto
Gịnị ka Microsoft Authenticator ekwentị ngwa na-eme?
Ngwa ekwentị ekwentị nke Microsoft na-enye gị ohere dị mfe, nke nwere nchekwa na akaụntụ n'ịntanetị, na-enye nyocha ọtụtụ ihe maka nchekwa nchekwa ọzọ.
Nyochaa koodu enyere na ngwa Microsoft Authenticator QR code reader, nke pụtara na ekwentị mkpanaka gị mgbe ị mepụtara akaụntụ ọrụ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ gị na Nzọụkwụ 6. Ngwa nyocha ahụ kwesịrị ịgbakwunye ọrụ gị ma ọ bụ akaụntụ ụlọ akwụkwọ gị nke ọma na-enweghị ịchọrọ ozi ozi ọ bụla site n'aka gị.